किन यौनसम्पर्क पछि पुरुषहरू कोल्टे फेर्छन् ? हर्नुहोस् - Experience Best News from Nepal
किन यौनसम्पर्क पछि पुरुषहरू कोल्टे फेर्छन् ? हर्नुहोस्
पुरुषहरू महिला साथीसँग टाढिन खोज्छन् वा कोल्टे फर्केर सुत्ने गर्छन् । यसतो किन हुन्छ भन्ने प्रश्न कुनै महिला मित्रको मनमा कहिल्यै उठेको छ कि रु छ भने यहाँ त्यही प्रश्नको उत्तर पहिल्याउने प्रयास गरिएको छ ।
यौनसम्पर्कले दुई विपरीत लिंगीबीचको घनिष्टता एवं अन्तरंग सम्बन्धलाई दर्शाउँछ, जहाँ आफ्नो पार्टनरका साथ उत्कृष्ट पलको महसुस हुन्छ । पुरुष तथा महिला दुवैलाई यौनसम्पर्कले विशेष प्रकारको चरम आनन्दानुभूति गराउँछ । तर केही पुरुष आफू स्खलित हुनेबित्तिकै महिला साथीको वास्ता नगरी, उसमाथि आफ्नो यस्तो व्यवहारले कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको ख्याल नै नगरी कोल्टे फर्केर सुत्ने गर्छन् वा टाढिने गर्छन् । पुरुषको यस्तो व्यवहारका पछाछि धेरै कारण हुनसक्छन् । के छन् त त्यस्ता कारण रु हेरौँ :
कुनै पुरुषले यौनसम्पर्कपछि कहिल्यै सम्पर्क राख्न खोजेन भने के बुझ्नुपर्छ भने उसमा केवल झुकाव वा आकर्षण थियो । उसले तपाईंसँग राम्रो समय बितायो अनि हिँड्यो । यो सम्बन्धमा उसका लागि योभन्दा बढी कुनै महत्व थिएन । हुनसक्छ महिला मित्र १ तपाईलाई त्यस पुरुषप्रति एक किसिमको अनुराग वा लगाव हुनसक्छ तर उसमा त्यस्तो कुनै धावना थिएन । यही कारण ऊ तपाईंसँग टाढा हुने हरसम्भव प्रयास गर्छ अथवा फेरि पनि कुने कारणवश यौनसम्पर्क स्थापित भयो भने अर्को पटक पनि उसको व्यवहार पहिलेभन्दा फरक हुँदैन । यस्तो अवस्थामा तपाईं केही गर्न सक्नुहुन्छ तसर्थ यस्तो सम्बन्धलाई बिर्सेर अघि बढ्नुमै बुद्धिमानी हुन्छ ।
महिला मित्र १ तापाईमा कुनै पुरुषलाई एक रात यौनसम्पर्क राखेर आप्mनो बनाउने चाहना छ भने तपाई गलत हुनुहुन्छ । यस्तो विचारलाई मनबटै निकाल्नु उचित हुन्छ किनभने अधिकांश पुरुष प्रेमदेखि डराउँछन् । उनीहरू प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न डराउँछन् । तपाईंले यौनसम्पर्कपछि ऊबाट यस किसिमको अपेक्षा राख्नुभयो भने ऊ स्वाभाविक रूपले टाढा हुन खोज्छ । तपाईंमा कुनै पुरुषप्रति अनुराग छ भने हतार नगरीकन भावनात्मक सम्बन्ध बलियो बनाउने बाटोमा लाग्नु नै उत्तम हुन्छ ।